I-TSMC igqibezela uyilo lwe-11nm A10 | IPhone iindaba
Inkampani yaseTaiwan Semiconductor, eyaziwayo njenge TSMC, Sele eqalile ukunika Ukugqitywa kokuchukumisa uyilo lwe-A11 chip, Inkqubo eya kwenziwa kwinkqubo ye-10nm FinFET. Ngokutsho DigiTimes, I-TSMC ngoku ikulungele ukuprinta iitshipsi eziza kusetyenziswa yi-iPhone ka-2017, nangona amanye amarhe esithi into abazimisele ukuyenza kukuqalisa ukuvelisa iiprosesa zeemvavanyo ezithile eziza kwenziwa ngaphambi kokuqala kwemveliso emininzi.
Emva kokugqitywa koyilo lokugqibela lweeprosesa ze-A11, i-TSMC inethemba lokufumana isatifikethi se Inkqubo yokuvelisa ye-10nm kwikota yokugqibela ka-2016. Kwikota yokuqala yonyaka ka-2017, inkampani yaseTaiwan izakuqala ukuhambisa iisampulu kwa-Apple kwaye, nje ukuba uTim Cook kunye nenkampani babanike lo msebenzi, bangaqala ngokwenza ngobuninzi into ezakuba yiprosesa. ye-iPhone 7s, i-iPhone 8 okanye nantoni na abayicwangcisileyo (ungalibali ukuba unyaka olandelayo sisikhumbuzo seminyaka eli-10 ye-iPhone).
I-TSMC ilindele ukuvelisa ubuncinci i-66% yeeprosesa ze-A11
Amarhe aqinisekisa ukuba i-TSMC izakuthatha indawo yokwenza zonke iiprosesa ze-A10 eziza kubandakanya i-iPhone 7. Nangona kunjalo, banethemba lokuyivelisa kuphela isibini kwisithathu seeprosesa ze-A11 ezakufika ngo-2017, uqikelelo lokuba, ngokoluvo lwam, lwenziwe ngobulumko.
Iprosesa ye-10nm iya kuba nobuchule obungama-30-40% ngaphezulu kune-A9 yangoku, isixhobo esenziwe kwinkqubo ye-14-16nm, kuxhomekeke ekubeni yenziwe yi-Samsung okanye i-TSMC. Ukuba songeza koku ngaphezulu kokufika kwesikrini se-AMOLED, ukuzimela kwe-iPhone ye-2017 kuya kuphucula kakhulu, ngakumbi ukuba sisebenzisa imvelaphi emnyama esikrinini. A Isikrini se-AMOLED Isebenzisa kuphela amandla kwiiphikseli ezivuthayo. Ukongeza, ngo-2017 ingunyaka weshumi leminyaka ye-iPhone, sinokulindela into entsha enokuphucula ukuzimela nangakumbi. Icala elisezantsi kukuba, njengesiqhelo, kuya kufuneka silinde ukufumanisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » I-TSMC iqukumbela uyilo lwe-A11. Iyakuba yi-10nm kwaye izakulunga ekuqaleni kuka-2017